XOG: 4 Rikoodh Oo Aanad Ogeyn Oo Lionel Messi Ka Dhigay Horyaalka Spain ee LaLiga, FIFA Club World Cup Iyo Copa Del Rey - GOOL24.NET
XOG: 4 Rikoodh Oo Aanad Ogeyn Oo Lionel Messi Ka Dhigay Horyaalka Spain ee LaLiga, FIFA Club World Cup Iyo Copa Del Rey
Lionel Messi waa lama taabtaan, tallaabo kasta oo uu qaadana waxa uu jabiyaa rikoodh hore loo dhigay amaba mid uu isagu shaqsiyan u dhigtay oo uu kasii sare maro. Xili ciyaareedkan, Messi wuxuu ku bilowday qaab wanaagsan oo muddo kooban uu kala dhantaalayy dhaawac haleelay oo uu shan kulan ku maqnaa, haddana 14 kulan oo dhamaan tartamada ah oo uu saftay, waxa uu dhaliyey 14 gool, waxaana u dheer 7 caawimood oo uu sameeyey.
Sidaas oo ay tahay, Lionel Messi kuma koobna dhalin iyo caawin oo kaliya, waxase u dheer xarfad cajiib ah oo uu ciyaartooyada ku kala jeediyo si la mid ah sidii uu hawada ugu diray Antonio Griezmann kulankii Ateltico Madrid iyo baasas cajiib ah oo ay adag tahay in ciyaartoygu sameeyaan. Waxa kale oo aan cidina malaysan karin, qaabka uu u laago laagga xorta iyo dhamaystirkiisa aanay da’diisa sii weynaanaysaa isbeddelka ku samaynaynin.
Dhamaan tallaabooyinkan, waxa uu Lionel Messi ku samaysay rikoodho isaga u gaar ah oo caddayn u ah awooddiisa, tayadiisa iyo sida uu u yahay laacibka ugu wanaagsan dunida ee shaki la’aan ay dadku isku waafaqsan yihiin in xirfaddiisu tahay u dhalasho sannado badan oo kale sii jiri doonta.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa afar rikoodh oo Lionel Messi uu ka sameeyey horyaalka LaLiga ee dalka Spain oo ay yar tahay dadka inta maqashay amaba og.
Ciyaartoyga ugu caawinta badan finalka Copa del Rey
Ciyaartii finalka Copa del Rey ee xili ciyaareedkii hore, Lionel Messi wuxuu sameeyey rikoodho taariikhi ah. Rikoodhka koowaad waxa uu ahaa inuu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee shan final oo kala duwan oo Copa del Rey ah ka dhaliya goolal. Sidoo kale, waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee saddex final oo Copa del Rey ah caawiyey goolal ay asxaabtiisu dhaliyaan.
Ciyaartii ugu horreysay ee final Copa del Rey ah waxa uu Lionel Messi ciyaaray sannadkii 2009 oo Barcelona ay Barcelona ku garaacday Athletic Bilbaao, waxaanu dhaliyey hal gool isaga oo mid kalena caawiyey. 2016 ayaa uu laba goo loo caawin ah sameeyey finalkii Copa del Rey, halka uu 2017 mar kale isku qoray buugga taariikhda ee ciyaartoygii ugu horreeyey ee saddex final oo kala duwan goolal caawiye ka noqday.
Waxa kale oo cajiib ah, tobankii sannadood ee ugu dambeeyey, Barcelona waxay ku guuleysatay dhamaan koobabka ciyaartii finalka ee Lionel Messi uu gool u dhaliyey amaba caawiye ka noqday, waana rikoodh taariikhi ah oo ay adag tahay in ciyaartoy kale kusoo dhawaado.
Si aad warbixinta Oo Dhan Usii Akhrido halka hoose ka dooro 2 iyo 3
Shaxda Rasmiga Ah Ee Alaves Vs Barcelona Iyo Valverde Oo Isbadal Wayn Sameeyay.